Waldhabdee bulchiinsa Daandii Qilleensa Itoophiyaafi waldaa hojjettootaa - BBC News Afaan Oromoo
Waldhabdee bulchiinsa Daandii Qilleensa Itoophiyaafi waldaa hojjettootaa
Waldaalee hojjetootaa Daandii Qilleensaa Itoophiyaa lama keessaa tokko Daandii Qilleensichaa waliin waldhabdee keessa seeneera.
Isaaniis, Giruuppii Daandii Qilleensa Itoophiyaa Waldaa Bu'uura Hawaasaafi Giruuppii Daandii Qilleensaa Itoophiyaa Waldaa Bu'uura Hawaasaa Qadaamaawwwii jechuun waamamu.
Waldaan Hawaasaa jecha 'Qadaamaawwii' jedhu of keessaa qabu kan hundeeffame wagoota 58 dura yoo ta'u Giruuppii Daandii Qilleensaa Itoophiyaa jedhamee hundeeffame.
Hojjettoota dhaabbileen buufatawwan xiyyaaraa Itoophiyaa hammachuuf, akkasumas gaggeessitoota haaraa gara fuula duraatti fiduudhaaf jecha maqaa haaraatiin Ministeera Hojjetaafi Hawaasummaarraa beekamtii argachuu isaa barreessaan ol-aanaa waldichaa Obbo Abduu Yimar ni dubbatu.
Giruuppii Daandii Qilleensa Itoophiyaa Waldaa Bu'uura Hawaasaa Qadaamaawwwii kun karaa qajeelaa ta'een hojjechiisaa isaa waliin mariyachuun mirgaafi faayidaa hojjetaa kabachiisaa akka jiru ibsa gaazexeessitootaaf dheengadda kenneen dubbatee ture.
Daandii Xiyyaaraa Itoophiyaa: Daandii Xiyyaaraa Afriikaa isa guddicha
Daandiin Xiyyaaraa Itoophiyaa Moqaadishootti balali'uu addaan kute
Aanga'oonni waldaa kanaa kana haa jedhaniyyuu malee, dura taa'aan waldaan hojjettootaa inni kan biraan, jechuunis Giruuppii Daandii Qilleensaa Itoophiyaa Waldaa Bu'uura Hawaasaa, Kaappiteen Yashiwaas Fantaahun kana waliin gonkumaa waliif hin galan.
"Waldaan sun walumaa galatti rakkoo qaba. Mirgaafi faayidaa hojjettootaa eegsisuudhaaf gahee inni qabaataa ture hangas mara miti. Zeeroodha jechuun ni danda'ama," jedhu Kaappiteen Yashiwaas.
Akka Kaappiteen Yashiwaas jedhanitti waldaan hojjetaa Giruuppii Daandii Qilleensaa Itoophiyaa Waldaa Bu'uura Hawaasaa Qadaamaawwii bulchiinsa waliin jaala cimaa qaba.
Daandii qilleensa Itoophiyaatti Pirezedaantiin Itti-aanaan Bulchiinsa Humna Namaa Obbo Masaay Shifarraaw bulchiinsi Daandii Qilleensaa Itoophiyaa warra 'Qadaamaawwii' waliin jaalala cimaa qaba himannaa jedhu sirrii akka hin taane dubbatu.
"Waldaa kana waliin hariiroo adda ta'e hin qabnu. Bulchiinsichi eenyumaafillee hin loogu. Kan dhorkaman yoo jiraate seera qabeessa waan ta'aniif gaaffii gaafachuu ni danda'u," jedhan.
Bulchiinsi isaanii hanga ammaa waldaa Qadamaawwii waliin waliigaltee 10 kan mallatteessan yoo ta'u, "waldaan haaraan miseensota isaa galmeessee erga nu beeksiseen booda dhimma miseensota isaarratti waliin dubbannee, 50+1 ta'ee yoo dhufedha kan waliigalteerratti dubbannu.
''Kanaaf, waldaa waggoota 57 ture waliin of dorgomsiisuun isaanii sirrii miti," jedhu Obbo Masaay.
Obbo Masaay itti dabaluun waldaan hawaasichaa waggoota dheeraa kan hojjete waan ta'eef turtii yeroo keessa waldaa hojjettootaa Qadaamaawwii kana waliin adeemsa keessa hariiroon bulchiinsa isaanii waliin ijaarame jiraachuu akka danda'u eeranii, kun ammoo bulchiinsi waldaa Qadamaawwii kanaaf ni looga jechuu akka hin taane dubbataniiru.
"Hojjetaan ni miidhama"
Dura Ta'aan Giruuppii Daandii Qilleensa Itoophiyaa Waldaa Bu'uura Hawaasaa Kaappiteen Yashiwaas, hojjetoota Daandii Qilleensaarra keessattuu miseensota waldaa isaanii irratti dhiibbaawwan sirrii hin taane taasisuufi tarkaanfiiwwan bulchiinsaa hin malle akka irratti fudhatan dubbatu.
Madda suuraa, EDIRIS KELIFA
Tarkaanfiiwwan kunneen sodaachisuutii hanga hojiirraa ari'uutti akka ga'u kan dubbatan Kaappiteen Yashiwaas, tarkaanfiiwwan bulchiinsaa hojjetoota irratti fudhatame lama sirrii miti jedhan akka fakkeenyaatti kaasu.
Paayileetiin akka maqaan isaa hin dhahamne barbaaduufi miseensa waldaa kanaa ta'e akka jedhutti miseensa waldaa kanaa kan ta'e garee Telegiraamii waldichaarratti yaada kenneen qofa hojiirraa dhorkameera jedha.
Xalayaan paayileetiin kun ittiin hojiirraa dhorkame akka ibsuttis Telegiraamii Garee waldichaarratti waan dharaa bulchiinsa bakka hin buuneefi maqaa gaarii inni qabu xureessu barreessu isaa ibsuun guyyoota lama keessatti deebii isaa akka kennuufi waraqaa eenyummaa dhaabbatichaa atattamaan akka deebisu gaafata.
Obbo Masaay dhimma kanaaf yeroo deebii kennan, "Hojjetaan tokko komii yoo qabaate karaa komii isaa itti dhiyeeffatu ni qaba. Fayyadamuu miidiyaa hawaasummaa ilaalchifnee qajeelfamni kanaan dura dabarsine ni jira.
Bu'uura akka waan maqaa dhaabbatichaafi bulchiinsaa xureessu akka kaasuu hin qabne akeekkachiifneen tarkaanfii fudhanne," jedhan.
Kaappiteen Yashiwaas bulchiinsi Daandii Qilleensaa kun dhiibbaa inni hojjettootarraan ga'u akka agarsiiftuutti kan kaasan kan biroon xalayaa sababa yaada miseensi maatii paayiletii tokkoo fuula Feesbuukii Daandii Qilleensichaarratti barreessaniif paayileetichi faayidaawwan isaa waggoota sadii akka dhabu taasifamedha.
Haati paayileetii kanaa maqaa isaanii eeruu hin barbaanne imala Daandiin Qilleensichaa bilisaan kennuun erga imalanii booda shaanxaan isaanii jalaa bada.
Miseensi maatii gochi kun isaan hin gammachiifne biroon fuula Feesbuukiirratti komii isaanii ibsatan.
Kanaan booda karaa Kaappiteenichaa Daandii Qilleensichaa ilaalchisuun yaada maatiin isaa barreessan akka kaasan taasiseera. Itti aansuudhaanis kaappiteenichi faayidaa tikeetii isaa kan waggaa sadii akka dhabu taasifameera.
Xalayaan faayidaa kana dhorku kun kan mallattaa'ee bahe Obbo Masaay Shifarraatiin. "Xalayicha kan barreesse anadha. Yeroo sanatti kaappiteenicha dubbiseera.
Dhaabbatichi tikkeetii bilisaa kennuudhaaf dirqama hin qabu. Akka faayidaatti kan kennamu. Silaa akka mana ofiitti yaaduun karaa ittiin shaanxaan bade argamu waliin haasa'uun nurra ture.
Murteen kunis kan kenname imaammata tikeeta bilisa ittiin kenninu bu'uura godhachuunidha."
Kana malees, komii Giruuppii Daandii Qilleensaa Itoophiyaa Waldaa Bu'uura Hawaasaa Daandii Qilleensaa kana irratti dhiyeessan keessaa miseensonni waldichaa buusii miindaa isaaniirraa akka gara akkaawontii waldichaatti galuuf hayyamamoo ta'an akka hojiirra hin oolle diduu isaaniidha.
Kaappiteen Yewaas, "Waraqaa tokko tokko miseensonni miindaa isaaniirraa kutuun akkaawontii waldichaatti akka galii ta'uuf itti mallatteessan qabannee gara bulchiinsa humna namaa Daandii qilleensaa deemnullee miindaa hin kutu jechuudhaan itti-gaafatamummaa seeraan itti kenname bahachuu dhiiseera," jedhu.
Obbo Masaay ammoo yeroo kanaaf deebii kennan, "Kun dhugaa miti. Miseensota galmeessanii nuuf dhiyeessaniiru. Miindaa hojjetaarraa akka citu hayyama seeraa kan qabu hojjeticha qofaadha. Kana ammoo hojetaan ofii isaatiin miindaa koorraa kutii galchi yoo naan jedhe malee waldichi naan jedheef miti," jedhan.
Kaappiteen Yashiwaas Waldaan Hojjetootaan gaggeessan miseensota 4,800 akka qabu ibsuun haala waldaa hojjettootaa biroofi bulchiinsa Daandii Qilleensichaa waliin gidduu isaanii jiru ilaalchisuun bor (Jimaata) akka ibsa gaazexeessitootaaf kennan dubbataniiru.
Paayileetotni daandii Xiyyaaraa Yunaayitid hidhaman